Cá lóc cảnh - Đặc điểm, phân loại & cách nuôi hiệu quả | Hatgiongtihon.net - trung tâm cung cấp hạt giống tí hơn
Đang Đọc: Cá lóc cảnh – Đặc điểm, phân loại & cách nuôi hiệu quả | Hatgiongtihon.net in Hatgiongtihon.net
Kwabo banomdla kwiintlanzi zokuhlobisa, ngokuqinisekileyo baqonda kakuhle malunga neentlanzi ze-ornamental snakehead kunye nemibala ekhethekileyo kunye nebalaseleyo yalo mgca weentlanzi zokuhlobisa. Kweli nqaku, i-Fao iya kukukhokela malunga nendlela yokunyamekela ngokufanelekileyo ii-snakeheads zokuhombisa kunye neentlobo ezidumileyo ze-snakehead namhlanje ukuba ukhethe ngokulula.
1 Ulwazi malunga neentlanzi zokuhombisa ze-snakehead
2 Indlela yokunyusa iintlanzi ze-snakehead zokuhombisa?
2.1 1. Indawo yokuhlala yeentlanzi zokuhombisa ze-snakehead
2.2 2. Ukutya kweentlanzi zokuhombisa ze-snakehead
2.3 3. Iindlela zokukhulisa iintlanzi zokuhombisa ze-snakehead
3 Ixabiso lentlanzi yokuhlobisa i-snakehead kwimarike namhlanje
4 Indlela yokuzala iintlanzi zokuhombisa ze-snakehead
5 Ezinye iintlobo zeentlanzi ze-snakehead zokuhlobisa zithandwa ngabantu abaninzi kwaye kulula ukuziphakamisa
5.1 1. Intloko yenyoka yephimpi eligolide (Channa Aurantimaculata)
5.2 2. Intloko yenyoka ebomvu (Channa micropeltes)
5.3 3. Intloko yenyoka encinci (Channa gachua)
5.4 4. I-Emperor snakehead (Channa marulioides)
5.5 5. Rainbow snakehead (Channa bleheri)
5.6 6. I-Banka snakehead (Channa bankanensis)
5.7 7. Intloko yenyoka entle (Channa lucius)
5.8 8. Intloko yenyoka ene-Ocellated (Channa pleurophthalma)
5.9 9. Intloko yenyoka enamabala (Channa punctata)
5.10 10. Chevron snakehead (Channa striata)
5.11 11. Intloko yenyoka yaseAfrika (Parachanna obscura)
Ulwazi malunga neentlanzi zokuhombisa ze-snakehead
Iintloko zeenyoka ezihonjisiweyo zezosapho lweChannidae. Ngokwendalo, zisasazwe ukusuka kumzantsi-mpuma we-Iran kunye nempuma ye-Afghanistan ukuya empuma ukuya e-China, emantla ukuya eSiberia, emazantsi kwisiqithi saseJava kunye nokusuka kuMnayile oMhlophe osentshona ukuya kwimithombo yeSenegal, iChad kunye namazantsi ukuya kwimithombo yoMlambo iCongo eAfrika. .
Intlanzi ye-ornamental snakehead ine-genera ezimbini (i-Channa, i-Parachanna) kwaye iquka iintlobo ze-34 (31 Channa kunye ne-3 Parachanna). Nangona ukuhlukana kukhulu kakhulu kwaye kukho uluhlu olubanzi lweentlobo ezingachazwanga, ngakumbi eIndiya.
Ukubonakala kwale ntlanzi akufani kakhulu neentlanzi zorhwebo, kodwa umbala wabo kunye noncwadi lwenza abantu abaninzi bathandane ekuqaleni.
Ngenxa yokuba zivelele kakhulu, zizisa i-aesthetics ephezulu kwindawo yasekhaya. Kunjalo ngoba intlanzi yokuhlobisa i-snakehead ithandwa kwaye ikhethwe ngabantu abaninzi.
Xa begcina iintloko zeenyoka ezihonjisiweyo kwi-aquarium, bathanda ukuba ne-algae eninzi ye-dogtail okanye iintlobo zasemanzini ngenxa yokufihla kunye nemikhwa yokulandela. Ehlotyeni bayasebenza kumandlalo wamanzi aphezulu, ebusika banzulu.
Ukuba unakekele kakuhle, landela imigangatho yobugcisa, ukondla rhoqo, kwiimeko ezifanelekileyo, intlanzi yokuhlobisa i-snakehead iya kukhula kakhulu kwaye ibeke amaqanda.
Indlela yokunyusa iintlanzi ze-snakehead zokuhombisa?
1. Indawo yokuhlala yeentlanzi zokuhombisa ze-snakehead
Iintlobo ezininzi ze-snakehead zivela kwindawo ethambileyo (ukuya kuthi ga kwi-8 GH) kunye ne-acidic kancinane ukuya kwindawo engathathi hlangothi (pH 5 ukuya kwi-7 pH), kwaye ezi xabiso zibonisa isikhokelo esifanelekileyo sokugcinwa ngempumelelo.
Ukunyusa intlanzi ye-snakehead akufuneki ukuba ubeke ingqalelo kumhombiso we-aquarium. Intlanzi ye-ornamental snakehead ithande ukuhamba kuphela xa ifika phezu kwamanzi. Bachitha ixesha labo bekama embindini wamanzi okanye bephumle emazantsi bezimele njengamarhamncwa.
Ngoko ke, kuyimfuneko ukubanika indawo enkulu yokufihla ngendlela ye-driftwood kunye nezityalo eziphantsi kwamanzi. Kuyenzeka ukusebenzisa iphytoplankton njengendawo yokugubungela umphezulu.
Iintlanzi ze-Snakehead zinesantya esinamandla kwaye zinokunkqonkqoza izinto ezijikeleze itanki okanye zivuse i-substrate. Ngesi sizathu kuyacetyiswa ukuba usebenzise igrabile kuyo nayiphi na i-snakehead aquarium endaweni yesanti ecolekileyo.
Ngaphandle koko, ukushukuma rhoqo kwamasuntswana esanti acolekileyo kuya kusivala isihluzi. Intlanzi ye-Ornamental snakehead inokurhaxwa xa ingasondeli kumphezulu, ishiye umoya owaneleyo xa igcwalisa itanki.
2. Ukutya kweentlanzi zokuhombisa ze-snakehead
Iintloko zeenyoka ezihonjisiweyo zikwayaziwa ngokuba ngabadli abakhohlakeleyo kwaye abantu bahlala becinga ukuba kwii-aquariums bamkela kuphela isiyeyelo esiphilayo. Nangona kunjalo, eneneni, ii-snakeheads zokuhombisa ziyakwazi ukuziqhelanisa nokutya iipellets ze-snakeheads zokuhombisa.
Intlanzi ye-snakehead inokutya i-bait ephilayo kwaye yamkele i-shellfish, intlanzi, i-shrimp ukuze isetyenziswe ngabantu kunye neepellets ezineprotheni. Ukongeza, okunye ukutya okutsha okungekho emanzini usenako ukuzondla ngokukhuselekileyo iintshulube, imisundululu kunye neqakamba. Iintlanzi ezincinci ze-snakehead ziyakutya i-krill shrimp kunye neentshulube ezibomvu.
3. Iindlela zokukhulisa iintlanzi zokuhombisa ze-snakehead
Iintloko zeenyoka ezihonjisiweyo zinonyamezelo oluhle kuba zihlala zihlala emanzini aneentlobo ezimbalwa ezisebenzayo. Ngapha koko, zininzi iimeko zokufa kweentlanzi xa zigcinwe kwii-aquariums ngesizathu esilula sokuba ziintlanzi ezinjengamanzi amileyo, ukuba ziwatshintsha rhoqo amanzi, ziya kufa.
Ngaphandle koko, kwimekobume yamanzi etephu, le ntlanzi ayinakukwazi ukuziqhelanisa nemeko kuba kukho iklorini eninzi engaqinisekisi ezo zinto.
Xa ukhetha isihluzi seentlanzi, khetha iimveliso ezinomthamo omkhulu kunye nomthamo ophezulu wokuhluza ibhayoloji ukunceda ukuqulatha ii-microorganisms ezininzi ezinoncedo.
Ngokubanzi, le ntlanzi enye yeyona ntlanzi ilula ukuyigcina kunye nokunyamekela, ungayithenga naphi na, qiniseka ukuba uyazi ukutshintsha amanzi ngokufanelekileyo.
Emva kokuthenga intlanzi ye-ornamental snakehead, kodwa ayidli ngokukhawuleza, ungakhathazeki ngenxa yokuba utshintsho olukhawulezayo kwindawo yamanzi lubenza bangakwazi ukudibanisa, kodwa le meko iya kuphelisa ngokukhawuleza. Emva kweentsuku nje ezimbalwa baya kutya ukutya kwabo njengesiqhelo.
Iiparamitha ezifanelekileyo zamanzi:
Iqondo lobushushu: ukusuka kwi-14 ukuya kwi-28°C
pH: ukusuka ku-6.0 ukuya ku-8.0
Ubunzima: 36 ukuya kwi-357 ppm
Ixabiso lentlanzi yokuhlobisa i-snakehead kwimarike namhlanje
Ixabiso leentlanzi ze-ornamental snakehead ukusuka kwi-500,000 ukuya kwi-100,000,000 VND ngokuxhomekeke kwiimfuno zakho kunye nokukhetha iintlobo ezifanelekileyo zeentlanzi. Eli lixabiso leentlanzi zokuhombisa ze-snakehead kwimarike namhlanje ukuze ubhekiselele kuwe.
Intlanzi ye-Ornamental snakehead ikhethiwe: ukusuka kumashumi ezigidi ukuya kumakhulu ezigidi / intlanzi.
Intlanzi ye-Queen snakehead: ubude ukusuka kwi-23 ukuya kwi-25cm – ixabiso ukusuka kwi-800,000 ukuya kwi-1,000,000 VND.
Intlanzi ye-Snakehead kunye neeparele ezimnyama nezibomvu: ubude ukusuka kwi-23 ukuya kwi-25cm – ixabiso malunga ne-500,000 VND.
I-Bluefin rainbow snakehead, i-snakehead ye-rainbow enemibala emihlanu, i-snakehead ye-Blue Bengal, i-snakehead yaseMyanmar: ubude bomzimba ukusuka kwi-8 ukuya kwi-9cm-ixabiso ukusuka kumakhulu amawaka aliqela.
Intlanzi enentloko yenyoka enezikali zedragoni: malunga ne-20cm ubude, idla ngokuthengiswa ukusuka kwi-500,000 VND.
Indlela yokuzala iintlanzi zokuhombisa ze-snakehead
Ukuveliswa kwe intlanzi yokuhlobisa i-snakehead kulula, ukuba inikwe indawo efanelekileyo yasemanzini. Ukucalulwa ngokwesini kwiintlobo zeentlanzi akulula kubaqalayo, nangona i-snakeheads yabasetyhini ibonakala ityebile.
Ukuba kunzima kakhulu ukwahlula isini se-snakeheads zokuhombisa, kufuneka ubeke iintlanzi ezininzi kwitanki enye ukuze zikwazi ukubhanqa zodwa (qinisekisa ukuba i-aquarium inkulu ngokwaneleyo ukuba ingahlala iintlanzi ezininzi ngokukhululeka. yokufihla indawo yokunciphisa umlingiswa ondlongondlongo wentlanzi).
Zombini ii-snakeheads zokuhombisa inkunzi nemazi zikhusela ifrayiji xa amaqanda eqanduselwa.
Ezinye iintlobo zeentlanzi ze-snakehead zokuhlobisa zithandwa ngabantu abaninzi kwaye kulula ukuziphakamisa
1. Intloko yenyoka yephimpi eligolide (Channa Aurantimaculata)
Intlanzi ebizwa ngokuba yi-Golden cobra snakehead imalunga ne-40cm ubukhulu xa ikhula ifikelele kwinqanaba labantu abadala. Olu luhlobo olunobundlongondlongo, ngoko ke yigcine yodwa intlanzi nganye.
Ivela eNyakatho ye-Assam e-Indiya, olu hlobo lugcinwe kakuhle emanzini apholileyo kwiqondo lokushisa elingama-20 ukuya kwi-26oC. Iimeko ezifanelekileyo zamanzi zivela kwi-6 ukuya kwi-7 pH kunye ne-10 GH.
2. Intloko yenyoka ebomvu (Channa micropeltes)
Intlanzi ye-snakehead ye-cotton ikwabizwa ngokuba yi-snakehead enkulu (intloko yenyoka enkulu). Ziyakwazi ukukhula zibe yimitha enye okanye ngaphezulu. Nangona uhlala kwindawo engcono kakhulu, i-snakehead fish yeyona ntlanzi inkulu ye-snakehead. Ke ngoko, i-aquarium enkulu kakhulu iyafuneka ukukhulula intlanzi ye-snakehead yabantu abadala.
I-snakehead fish ikwakwiqela leentloko zeenyoka ezindlongondlongo kwaye ziya kuhlasela iintlanzi ezininzi etankini, kuquka nohlobo lwazo, nokuba zinkulu okanye nangona ii-snakeheads zingalambanga, ziya kuhlasela. Banamazinyo makhulu kwilali yeentlanzi ze-snakehead kwaye baya kuyisebenzisa ukuluma abantu.
Nangona abantwana abancinci benombala onomtsalane, onepateni enomgca o-orenji oqaqambileyo ecaleni komzimba wentlanzi, ekuhambeni kwexesha lo mgca ukhawuleza uphele kwaye abantu abadala banombala oluhlaza othambileyo nofipheleyo.
Intlanzi ye-snakehead ayifuni indawo ehlala emanzini kwaye ingagcinwa kubushushu obuphakathi kwe-26 kunye ne-28oC, kunye ne-pH eqhelekileyo kunye nokuqina ukuba nje ingekho phezulu kakhulu. Le ntlanzi yokuhlobisa i-snakehead ifanelekile kuphela kwabo banamava kuyo.
3. Intloko yenyoka encinci (Channa gachua)
Olunye lolona luhlu lubanzi lweentlobo ze-snakehead zokuhombisa, ezibonwa ngokubanzi njengeentlobo ezintsonkothileyo.
Iintloko zeenyoka ezinqabileyo, ngakumbi iintsana ezisuka kuMntla weIndiya, kufuneka zigcinwe emanzini apholileyo kune-18 ukuya kwi-25oC, i-pH egcinwe phakathi kwe-6 kunye ne-7.5, i-GH 6 ukuya kwe-8 ifanelekile.
Kwinqanaba labantu abadala, isayizi yentlanzi encinci ye-snakehead ifikelela kuphela kwi-20cm, iimpawu zale ntlanzi zithambile kwaye zinokugcinwa kwitanki enye yoluntu kunye nezinye iintlanzi ezilinganayo.
4. I-Emperor snakehead (Channa marulioides)
Intlanzi ebizwa ngokuba yi-King snakehead fish ekwabizwa ngokuba yi-dragon scale snakehead fish, ukuya kuthi ga kwi-65cm ubude, ilungele ukukhuliswa yedwa, okanye igcinwe kakuhle nezinye iintlanzi ezinkulu ze-aquarium – kodwa isafuna itanki enkulu kakhulu!
Eyona ntlanzi ilungileyo i-king snakehead kufuneka igcinwe phantsi kweemeko ukusuka kwi-24 ukuya kwi-28oC, i-pH ukusuka ku-6 ukuya ku-7 kunye ne-GH 10.
5. Rainbow snakehead (Channa bleheri)
Eli lilungu leentloko zeenyoka ezincinci, ezithambileyo zeqela elincinci leentloko zeenyoka. Intlanzi ye-rainbow snakehead inenkangeleko enemibala emininzi kwaye imalunga ne-20cm ubude, ilungele iitanki zoluntu njenge-Dwarf fish.
6. I-Banka snakehead (Channa bankanensis)
Intlanzi ye-Banka snakehead mhlawumbi yeyona ntlanzi ikhethiweyo ye-snakehead ngokwemiqathango yamanzi. Le ntlanzi iphuma kwindawo yamanzi amnyama, ene-acidic kakhulu (pH ukuya kwi-2.8), i-pH kufuneka igcinwe iphantsi (ngaphantsi kwe-6) kuba ukuba iphezulu kakhulu, intlanzi kulula ukugula.
Intlanzi ye-Banka snakehead ifaneleka ngakumbi kwi-tannin / i-humic acid, ngoko ukubeka i-peat kwisihluzo kuya kuzisa inzuzo eninzi kwintlanzi. Nangona isayizi ye-snakehead yabantu abadala i-23cm kuphela, umlingiswa wayo unobudlova kwaye kungcono ukuwagcina kwitanki eyahlukileyo.
7. Intloko yenyoka entle (Channa lucius)
Ikwazi ukukhula ukuya kubude obungama-40cm, i-snakehead engqindilili yenye yezona ntlobo zininzi kwaye kufuneka zikhathalelwe ngokufanelekileyo. Umlinganiswa ondlongondlongo kwaye kufuneka agcinwe kuphela ngentlanzi enkulu, esempilweni. Iimeko ezifanelekileyo zamanzi kule ntlanzi yokuhlobisa i-snakehead ukukhula ngama-24 ukuya kuma-28oC, i-pH 5 ukuya ku-6.5 kunye ne-GH 8.
8. Intloko yenyoka ene-Ocellated (Channa pleurophthalma)
Enye yeentlanzi ezikhangayo kwi-Southeast Asia, i-snakehead fish inembonakalo eyahlukileyo xa kuthelekiswa nezinye iintlobo ze-snakehead ngokubonakala, umzimba wentlanzi ye-snakehead iyancipha. Ezinye iintlobo zineziqu ezinjenge-tubular.
Endle, i-snakehead fish ikholisa ukumila kumanzi amdaka aneasidi kancinane kunesiqhelo (pH 5 ukuya ku-5.6). Nangona kunjalo, le ntlanzi kulula ukuqhelana noluhlu lwe-pH ukusuka kwi-6 ukuya kwi-7 kwi-aquarium, ngoko ke gcina ubushushu ukusuka kwi-24 ukuya kwi-28oC kwaye amanzi akanzima kakhulu (8 GH).
Iintlanzi ze-Snakehead zithambile, zinokugcinwa kunye neentlanzi ezininzi ezinkulu, eziphilileyo. Ubungakanani betanki nabo kufuneka bube bukhulu kuba bufikelela kwi-45cm ubude.
9. Intloko yenyoka enamabala (Channa punctata)
Intlanzi ebizwa ngokuba yi-snakehead fish inzalelwane yaseIndiya, ixhaphake kuluhlu olubanzi, ukusuka kwiqondo elipholileyo ukuya kweletropiki. Ngenxa yoluhlu olubanzi olunjalo lokusabalalisa, banokumelana nomgangatho obanzi kakhulu wokushisa ukusuka kwi-9 ukuya kwi-40oC.
Iimvavanyo ezininzi ziye zabonisa ukuba ziyakwazi ukunyamezela uluhlu olukhulu lwe-pH, ngoko ke iimeko zamanzi azibalulekanga kakhulu nje ukuba ukugqithisa kugwenywe. Ubungakanani buncinci kakhulu, malunga ne-30cm, nangona kunjalo, intlanzi ye-snakehead enemibala ikwayintlanzi enomsindo kwaye iintloko zeenyoka ezinamachokoza zohlobo olufanayo zihlala kunye.
10. Chevron snakehead (Channa striata)
Iintloko zeenyoka ezimnyama ziphakathi kwezona ntlanzi zisempilweni, iimeko zamanzi azibalulekanga kakhulu kubo kodwa kufuneka ziphetshwe. Le yintlanzi enkulu, i-avareji ukuya kwi-90cm kwaye njenge-snakehead, ayifanelekanga ukugcinwa kunye nayiphi na intlanzi.
11. Intloko yenyoka yaseAfrika (Parachanna obscura)
Nangona ifana kakhulu nentloko yenyoka eshinyeneyo ngombala nokumila kwayo, i-snakehead yaseAfrika yahlulwa ngempumlo yayo ebalaseleyo, ende nenetyhubhu. Xa ukhula ube mdala, umzimba ungafikelela kwi-45cm ubude, iiparamitha zamanzi zale ntlanzi yokuhombisa i-snakehead kufuneka ifane naleyo yentlanzi eshinyeneyo ye-snakehead.
Ngoko siye safunda kunye indlela yokunyamekela intlanzi yokuhlobisa i-snakehead kunye nentlanzi ethandwayo yokuhlobisa i-snakehead. Ngale nto, i-Fao inethemba lokuba unokuba ngabanini beentlanzi ze-snakehead ezidlamkileyo nezisempilweni, udala indawo ebalaseleyo yekhaya lakho. Umnqweno omhle
Cá Lòng Tong – Thông Tin Về Cá Lòng Tong | Hatgiongtihon.net